Ikeyiki yeOatmeal eneapile kunye neerasentyisi | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 22/05/2021 10:00 | Postres
Ekhaya siqhele ukupheka iidessert ngaphandle kweswekile eyongeziweyo okanye iswekile encinci, nangona kunjalo asiziyeki ezakudala ngamaxesha athile. bucala ngasekhohlo ikeyiki ye-oatmeal eneeapile kunye neerasentyisi Yeyokugqibela esizamile kuyo. Ikhekhe onokuyifaka kwisidlo sakho, nokuba uyi-vegan.
Le ayisiyi ikeyiki yesiponji; Ikhekhe elingqingqwa lesiponji. Ikhekhe lesiponji elinesixa esincinci seswekile, apho ii-apile kunye neerasentyisi zongeza ubumnandi. Okanye kufanele, ukuba ukhetha iintlobo ezimnandi kunye neziqwenga ezivuthiweyo. Musa ukoyika ukubandakanya ukuya kuthi ga kwiiapile ezimbini ukuba azikho nkulu kakhulu!
Ikomityi yesidlo sakusasa konke okufuneka ukwenze. Ayisiyo ikeyiki ephakama kakhulu, kodwa inkulu ngokwaneleyo ukuba abantu abayi-6 bonwabele isilayi. Kwaye kungcono ukuba ibrown kakhulu kuba ukusukela ngosuku lwesibini lokugcina iyanzima. Ngaba unesibindi sokuyilungiselela?
Ikhekhe le-oatmeal elinama-apile kunye neerasentyisi lineswekile encinci kwaye lilungile njengesidlo sakusasa okanye ukuthatha umsebenzi kunye nokonwabela mid-kusasa ngekofu.
1 indebe epheleleyo yomgubo wengqolowa
1 indebe ye-oat flakes
Iipuniwe ezi-2 zepanela
Of kwigwele leekhemikhali
1 indebe ye-oatmeal okanye i-almond
1 icephe yeoyile ye-olive
2 apile amancinci, avuthiweyo
Sitshisa i-oven ukuya kwi-180ºC kunye negrisi okanye umgca umgca.
Emva koko, kwisitya, sixuba izinto ezomileyo: umgubo, i-oats, iswekile, igwele, isinamon kunye neerasentyisi. Unokwenza oku nge-spatula okanye ngecephe.
Xa sele udityanisiwe, songeza ubisi kunye neoyile Kwaye sidibanisa kwakhona de sifezekise intlama efanayo.
Ke Thela inhlama kwisikhunta kwaye sibeka kuyo iiapile ezixutyiweyo kunye nezisikiweyo, sizicinezela kancinci ukuzazisa ngokuyinxalenye kwintlama.
Sisa eziko kwaye sipheka imizuzu engama-35. Sijonga ukuba yenziwe kakuhle kwaye ukuba kunjalo, siyayicima i-oveni kwaye siyivumele iphumle iiyure ezingama-30 kwi-oveni enye kunye nomnyango ovulekileyo.
Ukugqiba, Ungayithengisi ikhekhe le-oatmeal kwi-rack kwaye ipholile ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Postres » Ikeyiki Oatmeal kunye apile kunye neerasentyisi